Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Itekhnoloji yenqwelomoya yeNASA ukonga ixesha labakhweli kwisikhululo seenqwelomoya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Itekhnoloji yokucwangcisa uhambo lweenqwelomoya ephuhliswe yiNASA eya kuthi kungekudala iphucule ukuxhomekeka kwabakhweli.
Umlawuli we-NASA uBill Nelson utyelele i-Airport ye-Orlando International eFlorida ngoLwesithathu kwaye wadibana neenkokheli zeenqwelomoya ukuba baxoxe ngokuphumeza iteknoloji yokucwangcisa inqwelomoya yenqwelomoya ephuhliswe yi-arhente eya kuthi kungekudala iphucule ukuxhomekeka kwabakhweli - okubaluleke kakhulu ngexesha lokuhamba okuphezulu njengeholide yoMbulelo.
NgoSeptemba, iteknoloji eyavavanywa ngexesha NASA's Airspace Technology Demonstration 2 (ATD-2) yakhutshelwa Ulawulo lwezoLawulo lwezoPhapho (i-FAA). Izikhululo zeenqwelo moya ezinkulu kulo lonke ilizwe - kubandakanywa neOrlando International - kungekudala ziya kusebenzisa ubuchwepheshe. UNelson uxoxe ngotshintshiselwano lwetekhnoloji kunye ne-Greater Orlando Aviation Authority CEO uPhil Brown.
"NASAIntsebenziswano kunye ne FAA ihlala inikezela kubantu baseMelika, iphucula ukusebenza kakuhle kweshishini leenqwelo moya zokusingqongileyo kunye nabakhweli kwilizwe liphela, ”utshilo uNelson. "Itekhnoloji yethu yokucwangcisa inqwelomoya, eyenza ukuba abasebenzi bakwazi ukulungelelanisa ngcono iintshukumo zenqwelomoya ngelixa bekwisikhululo seenqwelomoya, kungekudala iza kunceda ekuqinisekiseni ukuba abakhweli abaninzi bayehla emhlabeni kwaye bagoduke kwiiholide ngokukhawuleza nangempumelelo kunangaphambili. ”
NASA kwaye i FAA igqibe phantse iminyaka emine yophando lwemisebenzi yomphezulu kunye novavanyo lokubala ukutyhala kwisango ngokusebenzisa i-metering esekwe kwixesha kwizikhululo zeenqwelomoya ezixakekileyo, ukuze iinqwelomoya ziqengqeleke ngokuthe ngqo kumgaqo weenqwelo-moya ukuze zihambe kwaye ziphephe iteksi ezigqithisileyo kunye nokubamba amaxesha, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamafutha, ukukhutshwa, kunye nokulibaziseka kwabakhweli.
“Njengoko sisebenzisa le software, amava okuhamba aya ebangcono kubakhweli ngalo lonke ixesha ukukhutshwa kwenqwelomoya kuncipha. Kukuphumelela,” utshilo FAA Umlawuli uSteve Dickson. “I-NASA iseliqabane elibalulekileyo kwiinzame ze-FAA zokwakha inkqubo ezinzileyo yezophapho.”
I-FAA iceba ukuhambisa iteknoloji yokulinganisa umphezulu we-NASA ekuqaleni kwizikhululo zeenqwelo-moya ezingama-27, kuquka i-Orlando International, njengenxalenye yotyalo-mali olukhulu kubuchwepheshe bolawulo lomphezulu wesikhululo seenqwelo-moya ebizwa ngokuba yinkqubo yoManejala weDatha yeFlight yeSikhumulo (TFDM). Ukusebenza okuphuculweyo kunye nokuhamba kwexesha lokulinda ukusuka kwindlela yeteksi ukuya esangweni kusindisa amafutha, kunciphisa ukukhutshwa, kwaye kunika iinkampani zeenqwelo moya kunye nabakhweli ukuguquguquka ngakumbi kwixesha eliphambi kokushiya isango.
“Ukukhutshwa okulindelweyo kwe-TFDM ehlaziyiweyo ngo-2023 ihambelana noqikelelo lwethu lokubuyela kwitrafikhi yabakhweli kwangaloo nyaka,” utshilo uBrown. "Olu hlaziyo kufuneka lubangele amava alula kuluntu oluhambahambayo kwaye luphucule 'Amava e-Orlando' sizama ukuwanikezela yonke imihla kwisikhululo seenqwelomoya somgangatho wehlabathi."
Iqela le-NASA le-ATD-2 liqale labeka uvavanyo lweteknoloji yokucwangcisa inqwelomoya kubasebenzisi behlabathi lokwenyani ngoSeptemba 2017 kwisikhululo seenqwelomoya saMazwe ngaMazwe saseCharlotte-Douglas. NgoSeptemba 2021, izixhobo ezidibeneyo zokufika kunye nokuhamba (IADS) zigcine ngaphezu kwe-1 yezigidi zeegaloni ze-jet fuel. Olo londolozo lwenziwe lwaba nokwenzeka ngokunciphisa ixesha lokuqhuba kwe-injini ye-jet, ekwanciphisa iindleko zokugcinwa kunye nokulondoloza iinqwelomoya eziqikelelwa malunga ne-1.4 yezigidi zeedola kwiindleko zabasebenzi benqwelomoya. Lilonke, abakhweli basindiswa iiyure ezingama-933 ekulibazisekeni kwenqwelomoya kwaye bagcina i-4.5 yezigidi zeerandi kwixabiso lexesha.